ई-सिमका लागि के गर्दैछन् नेपालका मोबाइल सेवाप्रदायक ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
सोमबार, फाल्गुन ३, २०७७ १६:४३
काठमाडौं । सामान्यतया सिम भन्ने बित्तिकै हामी के सम्झन्छौं ? त्यही प्लास्टिकले बनेको चिप जडित सानो कार्ड । जसलाई मोबाइलमा राखेर फोन गर्न र डेटा चलाउन सकिन्छ । चाहे त्यो माइक्रो, मिनी वा न्यानो किन नहोस् ।
यसरी डिभाइसमा इम्बेड भएर आउने ई–सिमले भविष्यमा फिजिकल (भौतिक) सिम कार्डलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्नसक्ने संभावना प्रबल छ । यद्यपी हालसम्म ई–सिम उपलब्ध गराउने टेलिकम सेवा प्रदायक र ई–सिम सपोर्ट गर्ने मोबाइल डिभाइसको संख्या त्यति धेरै छैन ।
त्यसो त विश्वका कतिपय देशका मोबाइल सेवाप्रदायकले ई-सिम सपोर्ट गर्ने सिस्टम बनाइ सकेका छन् । भारतका एयरटेल र जियो जस्ता कम्पनीले समेत यस्तो सपोर्ट उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् ।
यसरी टेलिकम सेवा प्रदायक र मोबाइल डिभाइसको संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस हिसावले ई-सिम भोलिको भविष्य बन्ने निश्चित छ ।
यसरी विस्तारै विश्व बजारमा ई–सिम प्रयोगमा जाँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यसका लागि तयारी के भइरहेको छ ? हामीले यही विषयमा नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।